World’s most threatening superbugs ranked in new list ကမ္ဘာ့အ⁠န္တရာယ်အ⁠ပေး⁠နိုင်ဆုံး ပိုးမွှားစာရင်း - Myanmar Farmers' Portal
Home အထွေထွေသတင်းများ ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာ World’s most threatening superbugs ranked in new list ကမ္ဘာ့အ⁠န္တရာယ်အ⁠ပေး⁠နိုင်ဆုံး ပိုးမွှားစာရင်း
World’s most threatening superbugs ranked in new list ကမ္ဘာ့အ⁠န္တရာယ်အ⁠ပေး⁠နိုင်ဆုံး ပိုးမွှားစာရင်း
WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကနေ လူသားကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်အပေးနိုင်ဆုံး ပိုးမွှားစာရင်းသစ် ထုန်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေတဲ့ပိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းထိပ်ဆုံးမှာ E. coli အီး ကိုလိုင် ဗက်တီးယားဖြစ်တယ်။ သွေး ထဲပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးရုံတက်လူနာတွေမှာ နူမိုးနီးယားဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ မကြာခင်ကျင်းပမယ့် ဂျီ-၂ဝ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးမတိုင်ခင် ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းထုတ်ပြန်ရတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အစိုးရတွေအနေအနဲ့ ပိုးသေ ဆေးသုတေသနမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုစေချင်လို့ပါ။
ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပိုးတွေကိုသေစေမယ့်ဆေးစာရင်းက ခမ်းခြောက်နေပါပြီတဲ့။ မကြာသေးခင်က Klebsiella ကလက်ပစီယဲလာူးပိုးကလည်း ဆေးယဉ်လာပါပြီ။ အရင်က Carbapenems ဆေးနဲ့ ရသေးတယ်။ ယူအက်စ်မှာလည်း အမျိုးသမီးလူလူနာတယောက် ပိုသေဆေး ၂၆ မျိုးနဲ့ကုမရဖြစ်တဲ့သတင်း ထွက်ထားသေးတယ်။
• Carbapenems ဆေးယဉ်တဲ့ Acinetobacter baumannii ပိုးကနေ အသက်ရှူလမ်းနဲ့ သွေးမှာ ဆိုးတဲ့ ရောဂါပိုးဝင်တာကို ဖြစ်စေနိုင် တယ်။ Pseudomonas aeruginosa ပိုးကလည်း အတူတူဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• Enterobacteriaceae အုပ်စုထဲက Klebsiella, E. coli, Serratia နဲ့ Proteus ပိုးတွေက အသက်ရှူလမ်း၊ သွေးနဲ့ ဆီးလမ်း ပိုးဝင်တာ ဖြစ်စေနိုင်ကြတယ်။
• Vancomycin ဆေးယသ်တဲ့ Enterococcus faecium ပိုးကနေ အနာဒဏ်ရာနဲ့ သွေးကိုပိုးဝင်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• Methicillin ဆေးယဉ်တဲ့ Staphylococcus aureus ပိုးကနေ အသက်ရှူလမ်းနဲ့ သွေးမှာ ဆိုးတဲ့ ရောဂါပိုးဝင်တာအပြင် အနာဒဏ်ရာနဲ့ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ vancomycin ဆေးကိုလည်း တချို့ပိုးတွေက ယဉ်ပါးနေပြီ။
• Clarithromycin ဆေးယဉ်တဲ့ Helicobacter pylori ပိုးကနေ လေနာခေါ် အစာအိမ်ပိုးဝင်တာဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• Fluoroquinolone ဆေးယဉ်တဲ့ Campylobacter spp. ဗက်တီးရီးယားကနေ ဝမ်းလျောနိုင်တယ်။ သွေးထဲ ပိုးဝင်နိုင်တယ်။
• Fluoroquinolone ဆေးယဉ်တဲ့ Salmonellae ပိုးကနေလည်း အတူတူပဲ။
• Cephalosporin ဆေးနဲ့ Fluoroquinolone ဆေးယဉ်တဲ့ Neisseria gonorrhoeae ပိုးကနေ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ ဂနိုးရီးယား ရောဂါရစေတယ်။ သွေးနဲ့ အဆစ်တွေကိုပြန့်စေနိုင်တယ်။ ရှားတော့ရှားသေးတယ်။
• Penicillin ဆေးတွေကိုယဉ်နေတဲ့ Streptococcus pneumoniae ပိုးကနေ ဆိုးတဲ့ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်တာ၊ ဦးနှောက်အဖုံးလွှာ ရောင်တာအပြင် သွေးထဲပိုးဝင်တာဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• Ampicillin ဆေးယဉ်နေတဲ့ Haemophilus influenzae ပိုးကနေ ဆိုးတဲ့ အသက်ရှူလမ်းပိုးဝင်တာ၊ ဦးနှောက် အဖုံးလွှာရောင်တာ အပြင် သွေးထဲပိုးဝင်တာအပြင် အရေပြားနာတွေနဲ့ အဆစ်ရောင်တာဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• Fluoroquinolone ဆေးယဉ် Shigella spp. ပိုးကနေ ဝမ်းလျောစေမယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန် >>>>>> ကော်ဖီနဲ့ ကျန်းမာရေး